I-Uhans A6, amandla ezandleni zakho ngaphantsi kwe-euro engamashumi asibhozo | Iindaba zeGajethi
Sibuyela kwiActualidad Gadget enesixhobo esinexabiso eliphantsi kunye neempawu ezintle, i Uhans A6. Siyakuthanda ukukunika ezi ntlobo zokuphononongwa ngenjongo yokuba ungafumana izixhobo ezilingana neepotifoliyo yakho ngaphandle kokuhambisa ngeempawu ezithandwayo kwihlabathi liphela. Kule meko siza kuzifumana siphambi kwe-smartphone ekhethekileyo enothotho lweempawu esingazukuzifumana ngexabiso eliphantsi kangako.
Uhans A6 Yifowuni enexabiso elihlekisayo elisivumela ukuba sonwabele ukufunda ngeminwe, i-chassis yealuminium nokunye okuninzi. Masibone ukuba le fowuni yexabiso eliphantsi isinika ntoni kuphononongo lwethu namhlanje.
Njengamaxesha onke Kwimodeli kolu hlaziyo siza kuqhubeka nokuhlalutya uthotho lweeparameter ezinje ngescreen, ukusebenza, ukuphatha kunye nokunye okuninzi. Kodwa ukuba sele uyazi i-Uhans A6 kuqala kwaye ufuna ukwazi ezona nkcukacha zikhethekileyo, kulungile ukuba usebenzise isalathiso sethu kwaye ngenxa yoko ungalahleki kulwazi oluninzi, kwaye ungaya ngqo kuloo mhlathi Inomdla kuwe, ke ngaphandle kokulibaziseka Makhe siye kuvavanyo lwe-Uhans A6.
1 Loluphi uphawu Uhans?
2 Uyilo kunye nezinto ze-Uhans A6
3 Izixhobo ze-Uhans A6
4 Ikhamera, ukugcinwa kunye nokuzimela
5 Unxibelelwano kunye nomfundi weminwe
6 Isoftware kunye nezigqibo
Loluphi uphawu Uhans?
Ukuba ulandela iwebhusayithi yethu ngokusondeleyo, uyakube ubonile ubuncinci uphononongo lwezixhobo zabo, kwaye kungenxa yokuba i-Uhans ibisinika ixesha elingaphezulu konyaka uthotho lwezixhobo ngexabiso eliphantsi kakhulu elinikezela ngeempawu ezinomdla. Kule meko I-Uhans isekwe eHong Kong, akukho nto inokubhalwa ngayo ekhaya, ukuba sithathela ingqalelo ukuba ivela kwilizwe elinye kunye nezinye iimveliso ezaziwa kwilizwe liphela. ezifana neMeizu, Oppo okanye iXiaomi. Ngamafutshane, enye yeemveliso ezininzi zaseTshayina ezibonelela ngamaxabiso asezantsi kwintengiso yemfonomfono.
Uyilo kunye nezinto ze-Uhans A6
IAluminiyam, ewe sijamelene nefowuni enexabiso eliphantsi kakhulu enikezela nge-chassis yealuminium, kwiyunithi yethu sikonwabele isixhobo esinamacala asecaleni emnyama emnyama. Siyamangaliswa yindlela abaye bakwazi ngayo Nika i-Uhans A6 emnyama emnyama eyomeleleyo kwinxalenye yayo yealuminium, esenza ukuba sicinge ukuba mhlawumbi ipeyinti kwaye naphambi kwalo naluphi na uhlobo lokuthambisa lufumanise ialuminiyam yendalo, nangona kwezi veki sivavanye i-Uhans A6 khange sibe nethuba lokuyiqinisekisa, kuba ifowuni iyamelana kakhulu nayo nayiphi na imozulu embi. . Ukongeza, i-Uhans ibonelela ngemodeli ngemibala emibini: emnyama negolide.
Ngasemva Sifumana isiciko se-polycarbonate yenziwe ngezinto ezirhabaxa esizibonileyo kwezinye iiyunithi zezinye iimveliso. Le nto yeplastikhi ibambelela kakhulu, nangona kunzima ukuyiqhela loo nto ingaqhelekanga. Inyani yile yokuba enkosi kule plastiki sigcina ezinye zeenyawo kwaye siyinike Ukususa zombini ibhetri kunye neeSIM khadi ezimbini kunye ne-SD encinci. Okumangalisayo kukuba, i-Uhans isabheja kwibhetri eyongezelelekileyo, ethi kubasebenzisi abaninzi ibe yinzuzo enkulu ngenxa yokuba kunokwenzeka ukubuyisela endaweni yayo ngokukhawuleza.
Emuva sikwafumana inzwa yokufota, iFlash LED kunye naphantsi nje kwe- umfundi weminwe. Ngaphandle kwakhe X x 15.60 7.80 1.05 cm Sifikelela ngokulula kwiminwe yokufunda ngaphandle kokuhambisa isixhobo rhoqo. Inqaku elincamise i-Uhans ehlala ikhetha ukubeka umfundi weminwe kule ndawo. Icala lasekunene lelamaqhosha amathathu okusetyenziswa, amabini abelwe ivolumu kwaye elinye linikezelwe kuMandla kwaye livule. Ukuhamba kancinci kuphoswe kumaqhosha, kodwa kujongeka kuqinile kwaye kusebenza kakuhle.
Inxalenye esezantsi yeyesithethi, imakrofoni kunye nonxibelelwano lwe-microUSB. Ngeli xesha siphose kancinci mhlawumbi ukutsiba kwi-USB-C, nangona sithathela ingqalelo ixabiso, mhlawumbi ukufuna olu hlobo lobuchwephesha kukunqwenela kakhulu. Ngaphezulu siya kufumana uqhagamshelo lweJack ye3,5 mm kwaye ayikho enye into. Ngaphambili sinekhamera ye-selfie ephezulu, ipaneli ye-intshi eyi-5,5 kunye neglasi ye-2,5D, yinto eqhelekileyo kwiqela le-Uhans, kwaye emazantsi amaqhosha ama-capacitive amathathu okuhambahamba nge-Android ngaphandle kokukhanyisa ngasemva.
Izixhobo ze-Uhans A6
Masifike kubuchwephesha bobugcisa. Kwimicimbi yamandla amsulwa siza kuzifumana ngaphambili MediaTek, ngakumbi ngakumbi MT6580 ebaleka iyonke i-1,3 GHz, ethi nangona izakusinika ukusetyenziswa okuphakathi kwebhetri, inemida ethile yamandla ekufuneka siyithathele ingqalelo. Ngokubhekisele kwi-GPU, ihamba kunye ne-ARM Mali-400 MP2 kunye nenombolo 2GB kwimemori ISakhelo. Ngamafutshane, iya kubonisa ngokwaneleyo ukulawula uninzi lwemisebenzi yemihla ngemihla ukuba nje asifuni ukusebenza kwegraphic ephezulu.
Kwisikrini i-Uhans ihlala ivula isisombululo se-HD ngaphandle kwempumelelo, sifumana i-1280 x 720 px, engaphezulu kokutya umxholo we-audiovisual, nangona i-intshi ezi-5,5 zinokuyixabisa ngakumbi ipaneli epheleleyo ye-HD. Kwakhona ixabiso kunye nokuthathela ingqalelo ukuba libonelela nge-410 cd / m2 yokuqaqamba kunye ne-178º yokujonga ikona ngombulelo kwipaneli yayo ye-IPS LCD, masenze ukuba siqwalasele ukuba iimpawu zanele kwaye zanele ngaphezulu. Isikrini sinokulandelelana okungafaniyo kwe-1000/1 ukuya kuthi ga kwi-10 yeendawo ezininzi zokuchukumisa, ezibeka kakuhle ngokuchasene neentshaba ezinjengeDooGee ezinikezela kakhulu.
Ikhamera, ukugcinwa kunye nokuzimela
Ngokweekhamera, sibuyela kube kanye kumgaqo ofanayo njengamaxesha onke, ezi ntlobo zeefowuni ezinexabiso eliphantsi kunye nemvelaphi yaseTshayina zikhawulelwe i-8MP ye-Samsung CMPOS sensor ukuba kwimeko epheleleyo yokukhanya iya kusinika ukubanjwa kancinci kodwa umfanekiso owaneleyo. Kwelinye icala, ikhamera ye-selfie isinika i-5MP ngothotho lweziphuculo kwinqanaba lesoftware elifihla iimpazamo zalo. Ngokuqinisekileyo, kwakhona ikhamera lelona candelo libuthathaka kwisixhobo esinezi mpawu. Siza kurekhoda iividiyo kwi-Pvideo eyi-720 kwaye siya kuba nendawo yonke ye-2.0 f.
El ukugcinwa kwangaphakathi kuya kuba yi-16GB njengesiqhelo, ngeslot ye Amakhadi amancinci e-SD ukuya kuthi ga kwi-64GB, esinokusinika i-80GB iyonke kwisixhobo, sanele kwaye singasindisi. Ukuzimela kukwayindawo eyomeleleyo kubasebenzisi abaninzi, kwaye uya kuba nokulingeneyo, kwaye oko kusinika ibhetri eyi-4.150 mAh eya kuthi yanele ngaphezu kweentsuku ezimbini zokusetyenziswa kwesiqhelo, epheleleyo ukuba siyinika induku eninzi . Kwandithatha kakhulu ukufumana imibala kule bhetri, kufuneka ndinyaniseke.
Unxibelelwano kunye nomfundi weminwe
Ngeli xesha uthungelwano oluphezulu esiya kuba nakho ukonwabela kunye nalo Uhans A6 Inodibaniso lwedatha ye-3G, ubungakanani bayo kunye ne-eriyali elungileyo zisinike intsebenzo elungileyo, kwaye yamkela ngolungelelwano uninzi lweebhendi ezikhoyo eSpain. Mhlawumbi uqhagamshelo lwe-4G aluphosiwe, nangona sijonga kwixabiso kwakhona kwaye siqonda izinto ezininzi. Ibhetri yonakele ngandlela ithile xa sisebenzisa SIM khadi ezimbini, kodwa kwabaninzi oku kuyinzuzo. Ngokwe-WiFi sihamba kwi-classic 802.11 b / g / n kwaye siya kuba nayo I-Bluetooth 4.0.
Siyakonwabela unxibelelwano lwe-A-GPS kunye IGPS engakhange ibonise nakuphi na ukusilela kwiimvavanyo zethu, ngaphaya kokulahleka kweempawu zakudala xa siphantsi komhlaba okanye phakathi kwezakhiwo ezinkulu zaseMadrid. Sigxininisa ukuba njengayo nayiphi na ifowuni yaseTshayina exabisa ityuwa yayo siya kuyifumana I-Radio yomsakazo, ubunewunewu ngeeCawa zomdlalo ... akunjalo?
Ekugqibeleni umfundi weminwe unika intsebenzo ongayilindela kuyo, Ayicothi, nangona ingeyiyo enye yezona zikhawulezayo kwintengiso, kwaye ngesoftware sinokuyilungiselela ukwenza imisebenzi engaphezulu kokuvula.
Isoftware kunye nezigqibo
El Uhans A6 ikhatshwa ngu Android 7.0 NougatNangona inkampani ingakhethi ukubandakanya i-bloatware eninzi, inyani kukuba sifumana umxholo othile oza kufuna ukuba iMpande iwususe. Isebenza ngokufanelekileyo kwaye isebenzisa onke amandla eenkqubo zokusebenza zikaGoogle, ezinje ngescreen sokuqhekeka, inyani kukuba asifumananga zikhalazo zininzi kwinqanaba lesoftware, nangona kuyinyani ukuba utshintsho kufuneka lukhawuleziswe ukufumana intsebenzo esiyithandayo ngokupheleleyo.
Isixhobo sinokuthengwa LONTO ukusuka kwixabiso le- € 80, okanye ungathatha ithuba lokuya ngqo kwiAmazon ku LE LINK. Inyani yile yokuba kuthathelwa ingqalelo ixabiso, iimpawu kunye noyilo olusinika lona, ​​i-Uhans iveza isixhobo esifanelekileyo kwaye kufuneka ithathele ingqalelo. Ingxaki ayikho ekusebenzeni kwayo okuluhlaza, kodwa kwi sizifumana phi iifowuni ezinokuthi zikhuphisane nale ikwixabiso elifanayo, inyani kukuba kunzima ukufumana into exineneyo kwaye ebonelela kakhulu ngento encinci. Sihlala sikhumbula ukuba iinkwenkwezi zovavanyo lwethu zinikezelwa ngokusekwe kwi umgangatho wexabiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Uhans A6, amandla ezandleni zakho ngaphantsi kwe-euro engamashumi asibhozo